Samsung waxay soo saari doontaa Galaxy Note 5 ... Rose Rose | Wararka IPhone
Samsung waxay soo saari doontaa Galaxy Note 5… oo ku jirta Rose Gold
Paul Aparicio | | Android, Tartanka
Dhamaanteen waan ognahay awooda wax soo saar ee ay leedahay Samsung. Layaab malahan, shirkada Kuuriya waxay kamid tahay shirkadaha Apple alaab-qeybiyeyaasha, tusaale ahaan, processor-ka iPhone. Waxa ay u muuqato in ayan iyagu awood badan lahayn mala awaalka. Saaxiibkeey Miguel wuxuu dhihi lahaa "mar labaad ayey photocopierka la soo baxeen", laakiin waxaan siin doonaa faa iidada shakiga, in kasta oo ay umuuqato inay markan bilaabayaan inay tahay Galaxy Note 5 Rose Gold Waxayna sidaas ku samayn doontaa Kuuriyada Koofureed maalinta la soo bandhigi doono taleefannada iPhone 6s iyo 6s ee dalka, Oktoobar 23.
Way cadahay in Samsung muddo dheer soo saareysay aalado, kaliya ma ahan taleefannada gacanta, iyo in Apple aysan laheyn midabbo gaar ah, laakiin ay adeegsato midabka loo yaqaan 'Rose Gold color', oo aan ahayn midab kale oo madow, tusaale ahaan, iyo ku bilow isla maalinta Apple waxay soo bandhigi doontaa taleefannadeeda cusub ee dalka, waxay naga dhigeysaa inaan u maleyno in Samsung ay mar kale u muuqatay inay dan u tahay jihada shaqada ee kuwa Cupertino, in kasta oo, dabcan, ay macquul tahay inay horeyba u qorsheeyeen inay ku soo bandhigaan Xusuusin 5 ee Rose Gold muddo dheer cimilada. Waxa dhacaya ayaa ah in Samsung aysan u baahnayn wakhti kasta oo ay ku soo saarto qalab cusub oo qaab, cabbir iyo midabba leh.
Dabcan, ugu yaraan nooca Rose Gold kaligiis ma imaan doono, laakiin wuxuu la imaan doonaa si wadajir ah moodal Dahabka Platinum iyo mid kale oo ku jira Titanium SilverMidabyo lagu dari doono kuwii markii horaba la heli jiray, kuwaas oo ah Sapphire Black iyo Pearl White. Noocyada cusub ee midabada ayaa diirada la saari doonaa suuqa Aasiya, ka dib bilow ay ku iibin doonaan oo kaliya Kuuriya, waxay rajeynayaan inay ka bilaabaan dalal badan oo qaarada ah. Qiimaheeda ayaa noqon doona 965.800 oo lagu guuleystay, taas oo ka badan ama ka yar € 753.
Waxaan ku dhaafayaa halkan, anigoo u maleynaya Samsung inay wax qaban karto iyadoon dadka kale la eegin, laakiin duulimaadka dhagta gadaasheeda. Sidee u aragtaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Samsung waxay soo saari doontaa Galaxy Note 5… oo ku jirta Rose Gold
Waxaan rajaynayaa in maqaalkani yahay kaftan.
Miyaad ka gudbeysaa koobiyeynta markii Xusuusin 4 uu isna lahaa nooc casaan ah?
Marka in Apple ay sii deysay mobiil casaan KADIB Samsung ay sii deysay maxay tahay? Nuqul maya, sax?
Waxaa kugu indho beelay xagjirnimada oo aadan ka warqabin adduunka kugu xeeran.
Ku jawaab ElTaliCopias
Waa salaaman tahay, ElTaliCopias. Xusuusin 4 waa PINK. Xusuusin 5 waa ROSE GOLD.
Ohh raali ahow, waa run, gabi ahaanba waa midabbo kala duwan, marka waad saxantahay, waa la soo guuriyay.
Samsung had iyo jeer waxay ka dambeysaa koobiyeynta Apple, si ay u aragto haddii maalin uun ay keligood wax qaban doonaan.
PS: Iyo Xusuusta 3 waa isku mid, oo leh Xusuusta 2 mid kale oo nuurad ah ... iyo Xusuusin 1 ... mid kale oo ciid ah.
Dadkaasi waalanayaan hahaha
Ku jawaab Alberto
Hadda wax kasta oo ay rabaan inay ka nuquliyaan tufaaxa waxay si buuxda ugu mashquulsan yihiin shirkadda qaniinyada liidata ... taasi waa sababta aan ugu tagayo tufaaxa
Waa hagaag orod oo tag. Iyo intee in le’eg ayaa warka lagu daabacay isla isla kani in Apple ay ka soo minguurisay rukhsad ka socota Jaamacad Mareykan ah iyo in lagu xukumay markii ugu horeysay in ka badan 800 milyan oo doolar oo ganaax ah, oo ay weheliso cabasho kale oo ay gudbiyeen, u aado mid kale dhinac.
Ku jawaab Rafa
Waa run wixii Rafa sheegay, Apple waxay ku weyday dacwad ku saabsan nuqul ka sameynta XD
Boggan wuxuu qaadanayaa waqti si uu u xayaysiiyo warkan durba ku faafay adduunka. Kaalay, kaalay degelkan wuxuu jecel yahay inuu daboolo cilladaha Apple oo aad u sameyso waxyaabo la yaab leh cilladaha tikniyoolajiyadeed.
Ku jawaab vaderiq
Shaqooyinka Anti dijo
Wuxuu rumeysan yahay in midabadan ay yihiin wax horeyba uga soo baxay saamiga oo dhan. Motorola V3 iyo LG SHINE waxay horey u isticmaaleen dahab muddo dheer kahor inta aysan iPhone jirin. Isla Nokia oo leh midabbo badan.
Lenovo (Sisley S90) wuxuu lahaa nooc 2014 ah oo horey u isticmaalaya midabka dahabka ubax.
Jawaab Shaqooyinka Anti
Waad salaaman tihiin, Jobs Anti. Waan ogahay. Dhibaatadu waxay tahay in Samsung ay mar kale qaaddo tallaabo la mid ah Apple wax uun ka dib Apple. Su’aashu waxay tahay: 1- Samsung, 2- markale, 3- Apple uun kadib.
Apple waxay lumisay dacwad ka dhan ah shirkad reer Mexico ah oo loogu magac daray Iphone ... hahaha, xitaa ma aha inay asal yihiin.
Apple waxay ku kordhisay taleefannadooda taleefanka cabir ahaan haddaba waxaa soo baxday in Samsung ay nuqul ka tahay Apple.
Uma maleynayo in Note5 ay lumisay hal iib oo ah midabka unuga.
macruufka 9.1, taariikhdii wixii iOS 9 ahayd inay ahaato iyo wixii aan ahayn
Tani waa sida miisaska cusub ee Apple Stores ay uga jawaabayaan 3D Touch ee iPhone 6s